Balaadhinta Wadada Qorraxey Ee Bu'da Magaaalada Jigjiga Oo Bilaabatay - Cakaara News
Balaadhinta Wadada Qorraxey Ee Bu'da Magaaalada Jigjiga Oo Bilaabatay
Jigjiga(CN) Sabti, 10ka October 2015, Horumarinta magaalooyinku waxay qayb muhiim ah oo aad u wayn katahay dadaalada laxaadka leh ee horumarineed ee ay xukuumadu horay uga hirgalisay hadana ay kasii laba jibaarayso deegaanka guud ahaan.
Balaadhinta iyo dayactirka wadadan qorraxey ee bu'da magaalada jigjiga oo mudo qorshaha hirgalinteeda lagala tashanayay shacabka ay saamaynta kuleedahay maadaama ay xukuumadani tahay mid utaagan kajawaabida baahida iyo danaha shacabka iyadoo sharciga laraacayo cid kastana magdhaw iyo xuquuqdii sharcigu udhigay lasiiyay wakhtigii ay qabsadeen inay kaga diyaargaroobaan u dhamaaday ayaa bilaabatay maanta.
Wadadan oo dhererkeedu dhan yahay 3.5km balaceeduna yahay 30 mitir ayaa noqonaysa wado laba haad oo standard ah leh. waxaana magdhawgeeda ku baxay 70,000,000 birr iyadoo kadib markii lasoo qiimeeyay saamaynteeda shaqsi kasta loo horumariyay magdhawga. Kadibna shacabku iyagoo raali ka ah mudana dhararayay duminteeda labilaabay.
Hadaba duqa maamulka magaalada jigjiga mudane Axmed M. ayaa cakaara usheegay in balaadhinta wadadani ay qayb katahay qorshayaasha horumarinta dhanka jidadka ee xukuumada udhigan 5ta sano ee soo socota ee qurxinta bilicda magaalooyinka. Isagoo duqu raaciyay in fulinta wadadan uu wakhti, maan iyo miisaaniyad aad u badani ku baxday.
Ugudanbayna, shacabkii ay saamaynta kuyeelatay wadadani ayaa noo sheegay inay kuqanceen magdhawga raalina kayihiin iyo waliba inay si wayn ugu farxeen in labalaadhiyo wadadaas maadaama oo ay tahay horumar ay ubaahnaayeen oo qurux u ah bilicda magaalada awoodna usiinaya inay wax dhistaan waayo horay uma aysan ogayn heerka uu gaadhayo saamaynta ay kuyeelanayso wadadu balse maanta cid walba way xaqiiqsatay magdhaw badana waa lasiiyay. sidaa awgeed ayay dhaheen inaan xataa duminteeda kaqayb qaadano diyaar baan u nahay.